Kugara neInvestment yeIreland neGolden Visa
Isu tinopa Ehupfumi Kuenda Kunoshanda Services muIreland kune:
● Kugara nekudyara muIreland
● Ugari nekudyara kubva kuIreland
● Visa yegoridhe muIreland
● Pasipoti yechipiri kubva kuIreland
● Kugara nekudyara kweIreland nekudyara muzvivakwa
Best MaAgents ekugara zvakare neInvestment muIreland uye Magweta e Kugara neInvestment muIreland nevashandisi vezvivakwa zveDzimba dzekugara zvirongwa muIreland zvinoshanda zvakabatana kuchengetedza kwevatengi.
Kugara patsva nemaInvestment vamiririri kuIreland vanopa mabasa ekugara nekudyara muIreland, Residency nezvirongwa zvekudyara muIreland, Residency nehurongwa hwekudyara muIreland, yechipiri Residency nekudyara muIreland, mbiri Residency nekudyara muIreland, ugari hwekugara nekugara nekudyara muIreland. , Kugara zvachose nekudyara muIreland, Kugara kwechinguva nekudyara muIreland, Kugara nehurongwa hwekudyara muIreland, Kugara nehurongwa hwekudyara muIreland, Citizenship nekudyara muIreland, Citizenship nemapurogiramu ekudyara muIreland, Citizenship nehurongwa hwekudyara muIreland, kechipiri Citizenship nekudyara muIreland, hunyanzvi hwekuva Citizenship nekudyara muIreland, kugara uye ugari nekudyara muIreland, ugari uye ugari nekudyara muIreland, zvirongwa zvehupfumi zvehupfumi muIreland, Citizenship nehurongwa hwekudyara muIreland, Citizenship nehurongwa hwekudyara muIreland, wechipiri pasipoti muIreland, yechipiri passp ort zvirongwa muIreland, yechipiri pasipoti chirongwa muIreland, mbiri repiri pasipoti muIreland, pekugara uye yechipiri pasipoti muIreland, repamutemo repasipoti repashure muIreland, repasipoti repiri nekudyara muIreland, yechipiri ugari pasipoti muIreland, yechipiri pasipoti chirongwa muIreland, chechipiri zvirongwa zvepasipoti muIreland, vhiza yegoridhe muIreland, vhiza dzendarama muIreland, zvirongwa zvendarama zveIreland, chirongwa chendarama vhiza muIreland, vhiza yegoridhe vhiza muIreland, yechipiri vhiza vhiza chirongwa muIreland, mbiri vhiza vhiza muIreland, ugari uye vhiza yegoridhe. muIreland, kugara uye vhiza yegoridhe muIreland, mugari vhiza mugari muIreland, dhiza vhiza chirongwa muIreland, zvirongwa zvendarama vhiza muIreland.
"1 mira mhinduro" kune yako yese Residency nekudyara muIreland nerumwe rutsigiro.
Minimum Investment muIreland yeResidency nekudyara: EUR 200,000
Nhanganyaya Ireland uye Residency neInvestment
Dzidza zvakawanda nezveIreland
Ireland ndeimwe yenyika dziri pedyo dzeEuropean kuUS neCanada. Saizvozvowo inotyisa inotumira nzvimbo yekuongorora iyo yasara yeEurope - iyo UK haina kunyatsoita awa, Barcelona inongova maawa maviri ndege uye Roma angori maawa matatu. Kune vafambi venyika, hapana chaiko dzimbahwe repamusoro chero nzvimbo kunze kweIreland. Ireland ine mimwe mirawo yakaomarara yezvombo - hazvisi pamutemo kuva nepfuti kunze kwekunge uchigara pamusha, uye zvakadaro, pakupera kwezuva, pfuti yaunotenga inofanirwa kunge iri “purazi chairo.” Izvi zvinoreva kuti nhanho dzekupaza pfuti dzinenge dzisipo uye nhanho dzekutadza kwakaipa kazhinji kutaura dzakaderera muIreland. Inowanzo taura nzvimbo inochengetedzwa zvechokwadi kudaidza imba, inopesana nedzimwe nyika zhinji. Vese vanogara muIreland vanokwanisa kurapwa.
Pane mukana wekuti purofiti yako iri pasi peimwe nhanho, iwe unokwana bhiri rekiriniki kadhi rinoita kuti iwe uwane zvachose huwandu hwekiriniki yako manejimendi pasina. Pane mukana wekuti iwe haukwane chikwereti chekiriniki kadhi, iwe unofanirwa kubhadhara mari-yakavakirwa kune mamwe manejimendi senge kushanya kwenyanzvi, zvakadaro ivo vanotsigirwa nevakuru vehurumende, izvo zvinoita kuti mitengo irasikirwe zvakadzikira. Ireland inotopa iyo Yezvinodhaka Kubhadhara Scheme, iyo inovhara mari yaunoda kushandisa pane zvakatemerwa nachiremba mishonga, iyo Long-Term Chirwere Scheme, iyo inozotarisira yako mari kana iwe uchinge uchiramba uchienderera kana wakareba kutakura mamiriro, uye iyo Maternity uye Infant Kuchengeta Scheme, iyo inotsigira zvakanyanya mari yekiriniki yekuve nevana.
Vagari veIreland vanogona kuva vagari vaviri vane imwe nyika, chero nyika iyoyo ichionawo kugona kubata ugari hwemo. Izvi zvinoreva kushanduka kuva mugari weIreland hazvireve kuti iwe unofanirwa kupa rombo rako munyika yekwako. MuIreland, kunyangwe vasiri vagari vanogona kuvhura zviyero zvemari. Zvese zvaungade kuti uvhure rekodhi irwo rudzi rwepamutemo rwe ID yako (senge vhiza yako) uye kuongororwa kwenzvimbo yako, zvisinei nekuti nzvimbo yako iri mune imwe nyika. Mabhangi mashoma akanyanya kuomarara nevasiri vagari uye anoda maviri marudzi ekusimbiswa kwekero kana nhoroondo yemari kubva kurudzi rwako rwekutanga. Zvinosuruvarisa, zviyero zvemari muIreland hazviwanzo kuvhurwa pawebhu, saka uchafanirwa kumira padyo kusvikira iwe wanyatso kuve murudzi kuti ubate nebasa iri.
Izvo zvakajairwa mutengo wezvinhu zvekutanga muIreland hazvina mwero, asi zvakadaro hazvisi pamusoro pepamusoro semamwe marudzi eEurope, semuenzaniso, UK kana Sweden. Vanotsvaga vachienda kurudzi havafanirwe kutarisira kuisa parutivi toni yemari, uye havafanire kutarisira mararamiro akasarudzika emari shoma. Kunyangwe zvakadaro, vanogona kutarisira kurarama zvinobudirira vasina kupisa zviwanikwa zviripo mwedzi wega wega. Peruse pane tenzi zvakanyanya. Mari yekurarama muIreland inovimba zvishoma pamunogara. Saizvozvowo, sekune chero nyika, kugara mune imwe yenzvimbo dzemaguta eIreland, semuenzaniso, Dublin, Limerick, kana Galway ichave inodhura. Izvi zvinowanzoitika nekuda kwekudhura kwekugara iwe kwaunowana mukati memadhorobha madhorobha. Expats inogona kudzikisira iyi mari zvachose nekugara pamucheto kweguta. Chokwadi, kunyangwe kugara kure kure nenzvimbo yekufambisa yeruzhinji kuchaenda nenzira inoremekedzwa yekudzikisa mari muEmerald Isle.
Sezvakaratidzwa, paIreland irwo nyika yechitsuwa, zvigadzirwa, semuenzaniso, zvigadzirwa zvepamusoro, doro, uye gasi zvinofanirwa kuunzwa kunze uye nekudaro zvinodhura kupfuura zvaunogona kuita nenyika dzenharaunda. Kunyangwe vese maIreland vachipa kugutsikana kusingaite, kune akati wandei enzvimbo dzemadhorobha ayo ari kunyanya kunyanya pakati peap-pats. Vamwe vavo vanozivikanwa chete muchiedza chekuti ivo vari munzvimbo dzemadhorobha, zvichiita kuti zvive nyore kutenderera, kufamba nenyika, uye nekupa hukuru hwepasi rese kune vamwe vekunze kuti varongere mukati. Idzi nharaunda dzemumaguta dzakabatanawo nezviitiko zvine simba zvemagariro uye zvekutaura, zvichipa ex-patsva kuongorora kwakasarudzika uye kwakajeka kwenzvimbo dzakasiyana dzetsika dzeIrish. Dzidzo yeruzhinji muIreland ndeye mahara uye ine hunyanzvi hwepamusoro. Vachengeti vanongoda kubhadhara zvipfeko, zvinwiwa, uye zvekuchikoro. Mari idzi dzinozochinja uye dzinovimba nechikoro uye nezvaunoda kushandisa.
Kurairwa pachikoro chakazvimiririra kana chepasirese kunounza mari yemubhadharo kune vese veIrish vemuno uye sekupedzisira vakaratidza ex-pats. Mari yegore rega redzidzo inoenderana nechikoro uye nezera remwana wako mudiki, zvakadaro vachengeti vakajairika vanogona kutarisira kushandisa kwakatenderedza 10,000 EUR (11,000 USD) pamwana. Paunenge uchienda kune imwe nyika, zvakakosha kuti unzwisise zvimiro zvehukama nehunhu hunotarisirwa mumusha mako mutsva. Kusave neruzivo nezvekurambidzwa munharaunda kunogona kukonzera mamiriro anonyadzisa iwe kana, kunyangwe kubva mukusava netariro, kutungamira kune inotyisa mhedzisiro, semuenzaniso, nguva yejeri kana kudzivirirwa munharaunda.
Neraki, murudzi, semuenzaniso, Ireland, kuendesa kukanganisa munharaunda hakuzokonzeresa chimwe chinhu sechokwadi sejeri kana kuburitswa. Zvese zvinhu zvinofungidzirwa, zvakanaka kuti uzive nezverudzi uye zvemagariro zvishuwo nechinangwa chekuti iwe ugone kunyatso kugadzirisa uye kukwana mumba mako mutsva weIrish.
Zvekutanga zvinyorwa zveResidency neInvestment yeIreland
Chishoma kudyara kwe Kugara nekudyara muIreland
Mari yekuwedzera ye yendarama vhiza ye Ayarendi
Kugara nekudyara kweIreland
D visa / Mvumo yekugara kwenguva refu (makore maviri + makore matatu)
Kuchengetedza nguva yeResidency nekudyara kweIreland
Mushure memakore mashanu ekugara zviri pamutemo
Mushure memakore manomwe ane chimiro chePR
Ugari Hwenyika Hwakabvumidzwa kuvagari veIreland
Investment Sarudzo dze Kugara nekudyara kweIreland
Wokune imwe Nyika Investor Bond € 1million akaisa mari mubond pa0% yemari yemubereko
Enterprise kudyara € 500,000 yakadyarwa muIrish Enterprise kwemakore matatu
Mari Yekudyara € 500,000 yakadyarwa muhomwe yakatenderwa. Kuti uwane rumwe ruzivo ndapota ona zvinongedzo pazasi.
Zvivakwa Zvekutengesa Zvivakwa Mari shoma inosvika mamirioni e2 mune chero yeIrish REIT iyo yakanyorwa pane yeIrish Stock Exchange. Iko € 2 miriyoni yekudyara inogona kupararira kune akati wandei akasiyana maIrish REIT.
Yakavhenganiswa Investment Kuisa mari mune yekugara chivakwa chepashoma kukosha kwe € 450,000 uye yakanangana kudyara kwe € 500,000 muchibvumirano chevatorwa mutengesi, ichipa yakaderera mari ye € 950,000. Chiyero chekudyara muchisungo hachichazobatanidzwe nekukosha kweimba yatengwa.
Endowment € 500,000 philanthropic donation nemunhu (€ 400,000 apo vashanu kana vamwe vanhu vanopa mari yavo kune imwechete chirongwa chakakodzera).
Nei uchienda kune Residency nekudyara kweIreland
Ireland inhengo yeEU. Iyo ine yakakwira mwero yekurarama uye inoshamwaridzika bhizinesi nharaunda iyo inoita kuti nyika ino ive inokwezva kwazvo kune vanoita mari vari kutsvaga kutama. Iyo isina kuomarara goridhe yekugara chirongwa chinopa vanyoreri uye mhuri dzavo nemvumo yekugara iyo inogona kuvandudzwa nekusingaperi, nepo varimi vasingadanidzirwe kuti vagare muIreland. Vagari vanowana zvisina kuvharirwa, vhiza yemahara yekufamba muCommunity Travel Area, kusanganisira United Kingdom.
Mhuri inopinda muIreland
Nhengo dzemhuri yako dzepedyo dzinogona kuwana pekugara kana chako chikumbiro chapiwa, pasina kuita kuti uwedzere mari yekudyara. Izvi zvinosanganisira wako / waunofambidzana naye, vana vari pasi pegumi nemasere, uye vana vari pakati pe18 ne18 chero vasina kuroora uye nemari vanovimba newe (vadzidzi venguva yakazara).
Kugara nehurongwa hwekudyara muIreland insite
Vasiri-EEA vemunyika uye mhuri dzavo vanobvuma kune yakapihwa mari yekudyara muIreland yakavhurika kune veImigrant Investor Chirongwa. Vanotenderwa kunyorera vachapihwa kodzero dzekugara muIreland, dzinovabvumidza kupinda muHurumende pamavhiza ekupinda mazhinji. Iyo mvumo inotanga kupihwa kwemakore maviri uye inogona kuvandudzwa kweimwezve makore matatu.Imvumo yekugara inogona kuvandudzwa zvakare mukati menguva yekutanga-yemakore mashanu nguva pasina kuchengetedza mari.
Iko kudyara kunofanirwa kuve kwakanaka kuIreland, kwakanakira mabasa uye mukufarira veruzhinji, iyo mari yakasimwa inofanirwa kuwanikwa zviri pamutemo uye ndeyake muridzi wemari.
Zvikumbiro zvinofanirwa kuve nehuchapupu hwenet kukosha, humbowo hwemari inovhara kudyara, humbowo hweinobva mari, humbowo hwekuti mari inogona kutamisirwa uye rekodhi rematsotsi rakachena.
Kana yako application yabvumidzwa, haufanire kupa pekugara muIreland, asi unofanirwa kuita kushanya kumwe pagore rekarenda.
Mari inodiwa kuIreland
Parizvino, pane matatu sarudzo dzekuwana pekugara muIreland zvichibva mukudyara. Yekutanga ndeye isingadzoreke philanthropic mupiro weinenge USD 3.
Chechipiri, iwe unogona kusarudza kuisa mari mukambani yeIrish. Iko mari inofanirwa kuchengetwa kwemakore matatu.
Yetatu, iwe unogona kuisa mari muReal Estate Investment Trust, yeiyo shoma huwandu hweUS $ mamirioni.
Mutengi kutsigira Residency nekudyara kweIreland
Chikwata chedu che Residency neInvestment Agents kuIreland uye Residency ne Investment Lawyers yeIreland inopa vatengi uye mhuri dzavo muIreland nerutsigiro rwekuva mugari nekudyara kubva kuIreland, kugara nekudyara kubva kuIreland uye nemimwe mikana yekudyara yekubva kune dzimwe nyika, munyika makumi matatu nenomwe.
Masevhisi edu haana kungogumira mukugara nekudyara kubva kuIreland kana Golden Visa kubva kuIreland kana ugari nekudyara kubva kuIreland kana yechipiri pasipoti, isu tinobatsirawo mune yakanakisa dzimba dzekudyara mikana kubva kuIreland, ichipa mhinduro izere kana iwe uchida kumisikidza kambani mu Ireland kana kumahombekombe egungwa, zviwanikwa zvevanhu muIreland nezvimwe zvakawanda, izvo zvinosanganisira kuronga zvemari nezvimwe zvakawanda.
Kubatsira vatengi vedu nehugari-hwakavakirwa mhinduro mukati uye kubva kuIreland nekugara kwechipiri.
Rutsigiro Rwakakosha kune Vagari veIreland:
Isu tinopa zvinodhura Kugara nemabasa ekudyara yeIreland, kuburikidza neyedu inokwanisika mari yekudyara uye yekufambisa mutemo yeIreland, inokwanisika investment immigration solicitors kuIreland, inokwanisika Residency nevarairidzi vanopa mazano kuIreland, inokwanisika Kugara nemagweta ekudyara eIreland uye inodhura yekuenda kune dzimwe nyika kubvunza yakasimba kuIreland.
Kugara nekudyara kubva kuIreland kuenda ku37 Nyika.
Ndarama vhiza muIreland kusvika ku37 Nyika.
Ugari nekudyara kubva kuIreland kuenda ku37 Nyika.
Yechipiri pasipoti kubva kuIreland kuenda ku37 Nyika.
Bhizinesi Yakavakirwa kutama kubva kuIreland kuenda ku106 Nyika.
Kugara patsva nemapurogiramu ekudyara kubva kuIreland.
Goridhe visa zvirongwa muIreland kuenda ku37 Nyika.
Ugari nemapurogiramu ekudyara kubva kuIreland kuenda ku37 Nyika.
Chechipiri pasipoti zvirongwa kubva kuIreland kuenda ku37 Nyika.
Mapurogiramu ebhizinesi ekupinda munyika kubva kuIreland kuenda ku106 Nyika.
Kugara neInvestment yeIreland kuburikidza neReal Estate
Isu tinopa rutsigiro rwezvivakwa zvezvivakwa muIreland nemaonero ekuti mutengi anofanirwa kuwana zvakanaka kudzoka mukudyara muIreland, chero nguva, pavanoda kusarudza kubva mukudyara kwakaitwa navo kweKugara kwavo nekudyara kweIreland. Isu tinosungirirwa nevashoma vashoma vezvivakwa muIreland vane rekodhi rekodhi uye yavo midziyo iri munzvimbo dzakanaka muIreland, vachitora zvakanakanaka kudzoka.
Akanakisa edzimba dzimba dzekugara zvirongwa zveIreland nekudyara muzvivakwa muIreland.
Unoda kuziva - Ireland Kugara neInvestment
Kugara neInvestment Gweta kuIreland kunopa zvakadzama zvinyorwa zvinyorwa kune yako yakabudirira Kugara nekudyara kuIreland. Yedu yakajairwa masevhisi ekugara zvakare neInvestment kuIreland inosanganisira:
Magweta edu anonzwisisa zvaunoda kuti utamire kubva kuIreland kana kuenda kuIreland, zvichibva nekuti ndeapi mazano angaitwa
Isu tinotungamira Kwekutanga Kukoshesa Kushingairira, kugadzirira mushumo usati wakurudzira Residency nekudyara kweIreland kune vatengi kuti vawane Residence Mvumo yeIreland uye kudzora njodzi yekuramba.
Kubva pane mushumo wekushingairira kuIreland, isu tinokurudzirawo mamwe mapurogiramu ekubudirira kuri nani.
Kuti isu tifambire mberi neako Residency nekudyara kunyorera kuIreland isu taizoda makopi akaongororwa evatengi uye emhuri nhengo pasipoti.
Dudziro uye apostile ezvinyorwa Kugara nekudyara kunyorera kuIreland. Magweta edu akasarudzika eResidency nekudyara kweIreland uye vhiza yegoridhe inobatsira nekuzadza mafomu uye zvinyorwa.
Kana yako uye yako yemhuri zvinyorwa zveResheni nekudyara kunyorera kuIreland zvagadzirira, tichazvizadza nezviremera zvine chekuita neIreland.
Duration: 2 mwedzi
Kana chikumbiro chako cheKugara nekudyara kweIreland changobvumidzwa, tinogovana newe nhau dzakanaka uye tobva tatanga kugadzirira zvimwe zvinotsigirwa.
Isu hatitsigire kana kupa Residency nemasevhisi ekudyara muIreland kune pazasi vanotaurwa Vanhu kana mabhizinesi muIreland:
Residency nebasa rekudyara kuIreland hazvipi kupihwa kune Vatengesi kana vanogovanisa zvombo uye zvombo kubva kana kuIreland.
Residency nemapurogiramu ekudyara kweIreland hazvipi kupihwa kweTechnical kuongororwa muIreland kana maindasitiri espionage emapurogiramu ekudyara mukati kana kubva kana kuenda kuIreland.
Residency nekutsvaga kwekudyara kuIreland hazvipi kupihwa kune chero zvisiri pamutemo kana tsotsi zviitiko muIreland.
Residency nerutsigiro rwekudyara yeIreland haisi yevanhu vanobata maGenetic zvinhu muIreland.
Residency nebasa rekudyara kuIreland haisi yemabhizimusi anobata nezvombo zvine njodzi kana zvine ngozi zvebhagiri kana zvombo zvenyukireya muIreland.
Residency nechirongwa chekudyara rutsigiro rweIreland haruwanikwe kune vanhu veIreland vanoita mukutengesa, kuchengetedza muIreland, kana kutakurwa kwenhengo dzeVanhu.
Residency nekudyara yeIreland haisi yematare asiri pamutemo ekurera vana.
Residency zvirongwa zvebasa yeIreland hadzisi dzezvitendero uye masangano avo muIreland.
Residency nebasa rekudyara mu Ayarendi haina kupihwa kune vanhu vari kuita Zvinonyadzisira muIreland.
Kugara Kwedu magweta muIreland haitsigire bhizinesi rekutengeserana nezvinodhaka muIreland.
“Chiziviso Chakakosha : MM Solutions INC inotora chengetedzo inonzwisisika kunyatso gadza AML zvinyorwa zvevatengi veIreland neKYC yavo asi isu hatigamuchire chero mutoro (s) wekurambwa chero kupi zvako kubva kuzviremera muIreland kubvumidzwa kunyorera Residency nekudyara muIreland.
Kugara nekudyara muIreland nedzimwe nyika, pamwe nezvimwe zvakawanda zvinotsigirwa.
Isu tinopa yakanakisa Residency nerutsigiro rutsigiro muIreland mukudyara, kutamira kune dzimwe nyika uye kuronga kwezvivakwa muIreland.
Inotsigirwa neInternational Residency neruzivo rwekudyara uye zvinodiwa nemutemo zveIreland, tinogadzira mhinduro dzakanakisa.
Yedu Residency nemabasa ekudyara kuIreland inopa mitengo yakachipa, ine chinzvimbo chinobudirira cheIreland.
Isu takatora makore eruzivo rwekugara kwevaviri kuIreland kutsigira vatengi uye mhuri dzavo kuIreland.
Ruzivo Rwokugara nekudyara kwekukumbira kweIreland nevamiriri vepamutemo kuIreland vachipa rutsigiro kune vatengi.
Isu tine vakanyanya kukumbira uye vamiririri veIreland kubata maitiro uye kunyorera avo vakazvipira kubudirira kwako.
Pamberi pekugara kwako kuIreland uye mushure mekubvumidzwa, nhengo yedu yechikwata chepamusoro yaizovapo yebhizinesi kana rutsigiro rwemunhu kuIreland
Isu tine ruzivo rwepasirese muResidency nekudyara kusanganisira Ireland, kubatsira vatengi kubva kumativi ese epasi nemasevhisi akanakisa.
Muchiitiko icho, Kugara kwako nekudyara kuIreland kunokundikana, kune dzimwe nyika makumi matatu nenomwe dzatinoshandira, isu takagadzirira nehurongwa B.
Verengai mutengo weKugara neInvestment kuIreland
Kuti uverenge mutengo weKugara nekudyara kuIreland ndapota zadza zvese zvese kusanganisira nhengo dzemhuri uye zera ravo. Nekuda kwenhamba huru yevatengi veIreland, isu tinokwanisa kupa masevhisi ari nani nemutengo wakaderera. Kuverenga kuchasanganisira, kunosanganisira, mutengo weKugara nehurongwa hwekudyara kweIreland nedzimwe mhosva.
mhando vhiza yeIreland
Maitiro Ekubvumirwa kweIreland
Kwekugara kwenguva pfupi muIreland
Permanent Residence muIreland
Embassies uye ma Consulates eIreland
Kugara nekudyara muIreland uye mamwe maSevhisi
Isu takanyora pasi mamwe mashoma masevhisi atinopa muIreland nezvezvinoitika kana zvemberi zvinodiwa
Kana iwe uri kuronga kuenda nemhuri yako kuenda kuIreland nekudyara mari, isu semumwe wako kuIreland, tiripo kuti tipe zvakawanda zveimwe sevhisi uye uye nguva yaungade muIreland nemitengo inodhura.
Kunze kweResidency nekutsvaga kwekudyara kuIreland, isu tinopa bhizinesi, IT uye HR masevhisi zvakare muIreland, izvo iwe zvausingakwanise kuwana pasi peimwe amburera yakapihwa nevamwe vapi vamazano eIreland vachitigadzira shopu imwechete yekuIreland nenyika dze106.
"Takaisa makore ekuyedza uye pasi rose muZuva 106 kubatsira mhuri, vanhu, nevezvebhizinesi kuIreland mukuzadzisa zvinangwa nezvishuwo zvavo."
Isu tinotsigira nzira yemutengi wedu kupfuura Residency nekudyara kuIreland nerubatsiro rwemagweta edu, vanachipangamazano uye kusunga muIreland nepasi rese.
Tinogona kukubatsira kunyoresa kambani muIreland kana Offshore uye 106 Nyika (Mari yekunyoresa kambani muIreland yakachipa nesu.)
Akaundi yeBhangi muIreland
Chero ani investor anotamira kuIreland angazoda account yako yebhangi muIreland uye account yebhangi yekambani muIreland, isu tinogona zvakare kubatsira nemaoffshore bank account.
Payment gedhi muIreland
Kana iwe uchida kubvunza muIreland, ye mhinduro dzemadhijitari muIreland senge yechinyakare kana fintech yekubhadhara gedhi muIreland kana crypto mhinduro, tizivise.
Mushure meResidency nekudyara ku Ireland kana uchironga tanga bhizinesi nekutenga riripo bhizinesi muIreland kutanga pakarepo muIreland.
HR Services muIreland
Our kambani yevashandi muIreland inogona kukubatsira nekukurumidza kutora vanhu. Iwe unogona zvakare post nzvimbo muIreland vakasununguka.
Virtual Nhare Dzenhamba kuIreland
Bhizinesi foni nhare dzeIreland pamwe ne manhamba chaiwo eIreland Nyika 102 uye Maguta 291.
Zvemari Kuronga Services muIreland
Accounting, kushingairira kwakakodzera muIreland uye zvakawanda.
Virtual Hofisi Kero muIreland
Setup bhizinesi muIreland
Mushure mekugara patsva nekudyara kuIreland, setup bhizinesi mu Ayarendi.
Isu tinopa pazasi zvakataurwa mhinduro dzeIT muIreland
Kugadzira Webhu muIreland
Ecommerce Kuvandudza muIreland
Webhu kuvandudza muIreland
Kuvandudza kweBlockchain muIreland
App Kubudirira muIreland
Software Kubudirira muIreland
Magweta e Residency neInvestment muIreland
Isu tinopa Kugara zviri pamutemo neInvestment mhinduro kuIreland uye kubudirira kwevatengi vedu kwakakosha, kuIreland, isu tiri vatungamiriri, kambani yedu yemutemo yeIreland ine vamiririri vekunze vanoenda kuIreland, isu tine mukurumbira wekuburitsa yakanakisa mutengi sevhisi yeIreland ne kujekesa sarudzo dzekudyara mhinduro kune vanhu veIreland nemhuri dzavo. Kugara kwedu neboka rekudyara kuIreland kunopa mhinduro dzakagadziriswa dzekubudirira kweMutengi.
Nhengo dzemhuri yako (vana, mudzimai, vabereki) vanokodzera kupihwa mvumo yekugara kuIreland, pane mvumo yekugara muIreland ichibvumidzwa.
Simba regweta reIreland rinodikanwa kune ese matanho epamutemo pachinzvimbo chako neResidency nevamiriri vezvekudyara muIreland. Kana iwe uri muIreland kana uchida kushanyira Ireland, tinogona kuwana simba rako regweta pano.
Isu hatibhadhare yakawedzera yekuwana Simba regweta. Kana iwe uchironga kutanga kunyoreswa kwekambani kuIreland ari kure, simba rako regweta rinofanirwa kuve rakanyoreswa zviri pamutemo kuti rishandiswe mundima yeIreland. Zvichienderana nenyika yaunogara, inofanirwa kuve yakatendeka kana kunyoreswa zviri pamutemo nemumiriri weIreland.
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - Kugara neInvestment muIreland
Ndeipi tsananguro yekugara nekudyara muIreland?
Kugara nekudyara kuIreland, kunogona kutsanangurwa sekuwana kugara kweIreland kubudikidza nekudyara muhupfumi hweIreland kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera kuti ugare nekudyara kuIreland, ugaro nehurongwa hwekudyara kweIreland. inotsigirwa nekugara nemabasa ekudyara kuIreland, kuburikidza nekugara kwedu kwakanakisa nemagweta ekudyara muIreland, kugara kwakanyanya nemagweta ekudyara muIreland uye kugara kwakanyanya nevanoona nezvekudyara kuIreland, vachishanda zvakanyanya kugarwa nevamiririri vezvekudyara muIreland, uye mafemu akanakisa ekuona nezvekupinda munyika. muIreland.
Kugara patsva nemabasa ekudyara kuIreland | Kugara patsva nevamiriri vezvekudyara muIreland | Kugara nemagweta eInvestment muIreland | Kugara nemagweta ekudyara muIreland | Kugara nevanoona nezvekudyara kuIreland
Ndeipi tsanangudzo yekuva mugari nekudyara muIreland?
Ugari nekudyara kuIreland, kunogona kutsanangurwa sekuwana ugari hweIreland kuburikidza nekudyara muhupfumi hweIreland kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe muIreland. Nyorera kuva mugari wemo nekudyara kuIreland, ugari nehurongwa hwekudyara kuIreland inotsigirwa nehugari hwemo nevekudyara mabasa kuIreland, kuburikidza nehukama hwedu hwakanakisa nemagweta ekudyara muIreland, ugari hwakanakisa nemagweta ezvekudyara muIreland uye hunhu hwakanakisa nevanoona nezvekudyara kweIreland, vachishanda kuva mugari wakanakisa nevamiririri vezvekudyara muIreland, uye akanakisa mafemu ekuona nezvekupinda muIreland.
Affordable Investor immigration services yeIreland | Vanodhura vanoenda kune dzimwe nyika vanokumbira muIreland | Vanodhura varidzi vemari vanoenda kune dzimwe nyika muIreland | Vanodhura varidzi vekupinda munyika magweta muIreland | Vanodhura varidzi vemari vanoona nezvekupinda muIreland | Affordable immigration law firms kuIreland
Ndeipi tsananguro yepasipoti yechipiri muIreland?
Yechipiri pasipoti muIreland, inogona kutsanangurwa sekuti, kuva mugari weIreland zviri pamutemo kuburikidza nekudyara muhupfumi hweIreland kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, zvivakwa, bhizinesi, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera pasipoti yechipiri kuIreland, yechipiri pasipoti chirongwa cheIreland chakatsigirwa wechipiri pasipoti masevhisi eIreland, kuburikidza nemagweta edu epiri epasipoti muIreland, magweta echipiri epasipoti muIreland uye akanakisa echipiri mapasipoti vanopa mazano kuIreland, vanoshanda kumahofisi echipiri epasipoti muIreland, uye akanakisa mafemu ekuona nezvekupinda muIreland.
Chechipiri pasipoti masevhisi eIreland | Chechipiri pasipoti vamiririri muIreland | Yechipiri mapasipoti magweta muIreland | Yechipiri mapasipoti magweta muIreland | Chechipiri pasipoti vanopa mazano kuIreland
Ndeipi tsananguro yegoridhe visa muIreland?
Goridhe visa muIreland, inogona kutsanangurwa sekuti, kuwana mvumo yekugara muIreland kuburikidza nekudyara muhupfumi hweIreland kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, zvisungo zvehurumende, bhizinesi, zvivakwa, nezvimwe. goridhe vhiza masevhisi kuIreland, kuburikidza neyedu akanakisa egoridhe visa magweta muIreland, akanakisa egoridhe vhiza magweta muIreland uye akanakisa endarama vhiza varairidzi kuIreland, vachishanda pane akanakisa egoridhe vhiza vamiririri muIreland, uye akanakisa ekupinda kwevanoona mafemu muIreland.
Goridhe visa services yeIreland | Ndarama vhiza vamiririri muIreland | Magoridhe vhiza magweta muIreland | Magoridhe vhiza magweta muIreland | Goridhe vhiza vanopa mazano kuIreland
Ndechipi chiri chidiki kudyara kweResidency nekudyara muIreland?
Kuderera kushoma kweResidency nekudyara muIreland iEUR 200,000.
Iwe unopa rubatsiro rwepamutemo kuIreland yeResidency nekudyara?
Ehe, gweta redu muIreland nevamiriri muIreland vanopa rutsigiro rweKugara nekudyara muIreland.
Kugara nekudyara kuIreland kunodhura here?
Mutengo weKugara neInvestment kuIreland uye Residency nemari yekudyara zvinodiwa kuIreland ndeye yakakwira mambure akakosha vanhu, isu tinobhadharisa chete kubvunza fizi reResidency neInvestment kuIreland, isu tinopawo yakawanda yakawanda imwe tsigiro yeResidency neInvestment mhinduro.
Ndeipi nyika vagari vanogona kunyorera Residency nekudyara kuIreland kana investor visa kuIreland?
Kugara nenzvimbo dzekudyara mabasa anogona kushandiswa nevagari venyika chero ipi asi mienzaniso mishoma ndeyeKugara nekudyara kuIreland kubva kuAsia, Kugara nekudyara kuIreland kubva kuAfrica, Kugara nekudyara kuIreland kubva kuEurope, Kugara nekudyara kuIreland kubva kuSouth America, Kugara nekudyara kuIreland kubva kuMalaysia, Kugara nekudyara kuIreland kubva kuBangladesh, Kugara nekudyara kuIreland kubva kuIndonesia, Kugara nekudyara kuIreland kubva kuSri Lanka, Kugara nekudyara kuIreland kubva kuNepal, Residency nekudyara kuIreland kubva kuIndia neResidency. nekudyara kuIreland kubva kuUAE.
Professional Residency neInvestment Guidance yeIreland
Kumbira kubvunza Mahara kune yako Residency neInvestment kuIreland
Mazwi akakosha muResidency neInvestment yeIreland
American Enterprise Institute - Iran Tracker
Washington Post - Middle East
Al-Monitor - Irani
Sangano reProhibition yeKhemera Zvombo
Pamberi - Tehran Bureau
Nhoroondo pane UN Resolution 2231 (2015)
Pars Nguva - Iran Nyukireya Zviwanikwa
Dhipatimendi reHurumende - Nonproliferation Sanctions
US Institute of Runyararo - Iran Primer
Zvekunze Policy muFocus
Monterey Institute - Center yeNonproliferation Zvidzidzo
Kanzuru yehukama hwekunze - Kuwedzera
Kubatana NeNyukireya Iran
Central Intelligence Agency - World Chokwadi Bhuku, Iran
Mutemo Wekunze - Iran
Belfer Center yeSainzi uye Zvepasi Pose - Iran Matters
Dambudziko reNyukireya Initiative
Asiri kudzvanywa Policy Policy Center
Arms Control Association - Iran Nyika Zviwanikwa
Woodrow Wilson International Center yeVadzidzi - Middle East Chirongwa
Nheyo yekudzivirira kweDemocracies
Institute for Science uye International Security
International Sangano uye Regime Links
Washington Institute for Near East Policy - Iran
Kuchengetedzwa Kwenyika - Iran
Project Alpha, King's College London - Alpha paIran
ISIS Nyukireya Iran
Radio Yemahara Europe / Radio Rusununguko - Iran
Center Yezvombo Kudzora uye Isiri-Kuwedzera - Iran
Iyo Yekusingaperi Mishoni yeIslamic Republic yeIran kuUnited Nations
Nyanzvi yezvehupfumi - Iran
Center for Strategic uye Nyika Dzose Zvidzidzo
Dhipatimendi reHaimari - Hofisi Yekunze Asset Kudzora, Iran Sanctions
Iran Kutyora uye Zvirango Tracker
Gadziriro yekugadzirira Komisheni Yenyukireya-Bvunzo-Ban Chibvumirano Sangano
Zvinongedzo kuPolitiki Masangano uye Mabhuku
Zvinongedzo kune Blogs yekufarira
American Israel Ruzhinji Nyaya Dare (AIPAC)
Carnegie Endowment Yenyika Dzese Runyararo - Nyukireya Policy Chirongwa
Atlantic Council - Ramangwana reIran
Iyo Yekusingaperi Mishoni yeIslamic Republic yeIran kuUnited Nations uye Mamwe Mahofisi Enyika Dzese muVienna
OPCW Chokwadi Sheet: Chii Chinonzi Chemical Weapon?
Missile Technology Technology Regime
MaNukes eHazard Blog
Federation yeAmerican Scientists (FAS) - Iran Nuclear Chirongwa
Atomic Energy Sangano reIran (AEOI)
Nyukiti Yezvinhu ZveNyukireya
Iran Bhizinesi Registry
Link to Dhipatimendi Rekupinda muIreland , vane basa rekuumba marongero ekuchimbidza Kufamba kwevanhu muIreland